ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ဒုအာဆုမွန်တောင်းခံခြင်းထက် ပို၍မြင့်မြတ်သောအရာဟူ၍မရှိ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ဒုအာဆုမွန်တောင်းခံခြင်းထက် ပို၍မြင့်မြတ်သောအရာဟူ၍မရှိ။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ဆုတောင်းခြင်း၏ ထွတ်မြတ်မှု။ .
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء».
အဗူဟုရိုင်ရဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ဒုအာဆုမွန်တောင်းခံခြင်းထက် ပို၍မြင့်မြတ်သောအရာဟူ၍မရှိ။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဟစန်အဆင့်ရှိသည်။ - အိဗ်နုမာဂျဟ်ကျမ်း။
(အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ဒုအာဆုမွန်တောင်းခံခြင်းထက် ပို၍မြင့်မြတ်သောအရာဟူ၍မရှိ။)အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒုအာသည် အိဗာဒသ် ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အဖန်ဆင်းခံများကို အိဗာဒသ်ပြုရန်အတွက်သာ ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒုအာဆုတောင်းခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူခြင်းနှင့် အရှင်မြတ်၏ ကျယ်ဝန်းလှသောအသိပညာကိုညွှန်ပြပြီး၊ ဒုအာတောင်းခံသူ၏ မတတ်စွမ်းနိုင်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိမှုတို့ကို ညွှန်ပြနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုအာဆုတောင်းခြင်းသည် အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင် အမြင့်မြတ်ဆုံး အရာများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒုအာဆုတောင်းခြင်း၏ မွန်မြတ်မှုကို တင်ပြထားသည်။ ဒုအာသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင် အမွန်မြတ်ဆုံးနှင့် အမြင့်မြတ်ဆုံးအရာပင်ဖြစ်သည်။
ဒုအာဆုတောင်းရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ဒုအာတောင်းခံရန် စိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဧကန်အမှန် ဒုအာဆုတောင်းခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးအရာပင်ဖြစ်သည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ဆုတောင်းခြင်း၏ ထွတ်မြတ်မှု။ .
အကယ်၍ ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါက ဆွလာသ်ငါးကြိမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဂျုမုအဟ်တစ်ကြိမ်မှ နောက်ဂျုမုအဟ်သည်လည်းကောင်း၊ ရမဿွာန်တစ်လမှ နောက်ရမဿွာန်သည်လည်းကောင်း ယင်းတို့၏ စပ်ကြား၌ရှိသော အကုသိုလ်များအား ပလပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
လူတစ်ချို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ပစ္စည်းများကို မမှန်မကန် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် ကိယာမသ်နေ့တွင်ငရဲမီးရှိသည်။
အသင်တို့သည် ကွယ်လွန်သူများကို ဆဲဆိုမကောင်းပြောခြင်း မပြုကြလေနှင့်။ ဧကန်အမှန်ပင် ၎င်းတို့သည် သူတို့ကြိုတင်ပို့ထားသည့် အရာများဆီသို့ ရောက်သွားကြပြီဖြစ်သည်။
မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးသည် မိမိညီနောင်အား သုံးရက်ထက်ပို၍ မခေါ်မပြောဘဲ နေပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ ၎င်းတို့နှစ်ဦး ဆုံတွေ့သည့်အခါ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကျောခိုင်းကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးအနက် အကောင်းဆုံးသူမှာ စလာမ် စပေးသူပင်ဖြစ်သည်။
ဆွေမျိုးသားချင်း အဆက်ဖြတ်သူသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ ဝင်ရောက်ရမည်မဟုတ်ပေ။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အရွံမုန်းဆုံးသူမှာ အလွန်ပြဿနာရှာတတ်သူပင်ဖြစ်သည်။
ဧကန်အမှန်ပင်(ဒုအာ) ဆုတောင်းခြင်းသည် အိဗာဒသ် ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပင်ဖြစ်သည်။